Shahaadada Qiimaynta Darawallada Wadnaha Dahabka ah ee EGO Bas | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Central Anatolia06 AnkaraShahaadada Mahadcelinta Darawallada Wadnaha Dahabka ah ee Wadnaha Wadnaha ee EGO
23 / 02 / 2020 06 Ankara, Gobolka Central Anatolia, ego, GUUD, WADADA, HAY'ADAHA, Nidaamyada Tire Wheels, TURKEY
shahaadada qadarinta darawalada baska ego
Maareeyaha guud ee EGO Nihat Alkaş wuxuu xafiiskiisa ku marti qaaday darawallada basaska wuxuuna u soo bandhigay Shahaadada Mahadnaqida dhaqankooda wanaagsan.
Darawalka basaska EGO Hacı Ali Çiğdem, oo ka shaqeeya khadka Sıhhiye-Ulus, iyo Mustafa Tekin, oo ka shaqeeya qadka Siteler-Kızılay-Ulus, ayaa gaarsiiyay bacaha ay heleen intii ay ku gudajireen waajibaadka milkiilayaasha.
Darawalka EGO Hacı Ali Çiğdem wuxuu xaqiijiyey in boorso haween ah lagu iloobey baska intii lagu gudajiray howshiisa. Markuu arkay inay lacag badan iyo dahab ku jiraan boorsada, wuxuu markiiba u sheegay xaaladda Saldhigga Booliska ee Akdere.
Waxaa la go'aamiyay in bacda, oo ay boolisku baaraan, ay ku jiraan 33.000 Turkish Lira, dahabka iyo alaabada shaqsiyadeed. Ka dib daqiiqadihii halkaan lagu hayey, alaabada waxaa loo keenay milkiilaha si amaana iyo gebi ahaanba.
Dhacdo tan la mid ah ayaa ku dhacday Mustafa Tekin, darawalka baska EGO ee ka shaqeeya qadka Siteler-Kızılay-Ulus. Tekin wuxuu ka helay boorso kombuyuutar baska uu kujiro. Wuxuu arkay inay jiraan 50.000 oo Ciraaqiyiin Ciraaqiyiin ah iyo hal kiniin ah oo ku jirtay bacda uu helay.
Isla waqtigaas, qofkii ogaaday in boorsadiisu ka maqan tahay garoonka diyaaradaha oo bartay inuu ka yimid Ciraaq ayaa dib ugu soo laabtay barta baska laga raaco. Daqiiqado kadib, bacda waxaa loo keenay milkiilaha. Sida dalxiisayaal by mahad our dareewal iyo saraakiisha ogaaday in shacabka Ciraaq Turkiga yimid, "Waxaan si Turkey jecel isticmaalo, waan jeclahay badan haatan" ayuu daaha ka qaaday.
Maareeyaha guud ee EGO Nihat Alkaş wuxuu doonayey inuu la kulmo darawalka masuulka ka ah ka dib markii xaaladdan lagu wareejiyay isaga. Wadayaasha basaska EGO ayaa xafiiskiisa ku marti qaaday Hacı Ali Çiğdem iyo Mustafa Tekin. Alkaş wuxuu yidhi, “Saaxiibbadayada shaqadooda sida saxda ah u shaqeeya waa in la abaalmariyaa. Dhaqanka noocan ahi wuxuu noqday nooc dabeecad ah oo aan seegno. Waan kugu hambalyeynayaa oo waan kaaga mahadcelinayaa dhaqankii wanaagsanaa ee aad soo bandhigtay intii lagu jiray howshaada. ” Kadib wuxuu u bandhigay "Shahaadada Qiimaynta".
Labada darawal EGO waxay cadeeyeen inay aad ugu faraxsanyihiin kuna faraxsan yihiin soo dhawaynta Maareeyaha Guud waxayna u mahad celiyeen Alkaş.
Wadayaasha EGO Hacı Ali Çiğdem iyo Mustafa Tekin ayaa u mahadceliyay Mustafa Geyikçi, Madaxa Waaxda Maamulka Baska, Erkan Tarhan, Maareeyaha Qeybta 1aad ee Maamulka Basaska, iyo Arslan Arslan, Maareeyaha Qeybta 3aad ee Maamulka Baska.
Shahaadada Qiimaynta Darawallada EGO